माल अड्डामा मन्त्रीको छापा - परिहास - नेपाल
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ फरमान जारी गरेछन्, लाल सलाम र जय नेपालधारी ट्रेड युनियनका नेता कर्मचारीलाई पनि काममा लगाउने । सरकार परिवर्तनसँगै आफ्ना पार्टीनिकट संघ–संगठनका नेतालाई मालदार अड्डामा पठाएर भागशान्तिका नाममा लक्ष्मीको बिटो थाप्ने त परम्परा नै हो मन्त्रीज्यू ! जनता जान्न चाहन्छन्– ‘माथि’ थैली बुझाउनु नपर्ने भएपछि कतै सरकारकै आम्दानी स्रोत सुक्ने त होइन ? मालदार अड्डामा अब कसलाई पठाउने ? अवैध असुली अब कुन पार्टी समर्थित कर्मचारीले
सम्हाल्ने ? यसको ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ के छ ?